Iran: “Ing. ElBaradei namanay” ao Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Febroary 2011 6:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, srpski, Português, Español, English
Manohy mizara ny fomba fijeriny mikasika ny fitroarana any amin'ny tontolo Arabo ireo Iraniana mpitoraka bilaogy avy amin'ny firehana politika samihafa.
Masih, Islamista iray tena fatra-mpandàla ny nentin-drazana no manazava anatina lahatsoratra iray lavabe hoe nahoana ny Hizbollah any Iran ny tsy tokony hanimba ny endrika maneho ny fanoherana Ejiptiana Mohamed Mustafa ElBaradei na “fomba ahoana no tsy hamadihana ny fandresena mazava azontsika ho lasa faharesena”. Miresaka momba ny fanohan'ireo Rahalahy Silamo an'i ElBaradei ilay mpitoraka bilaogy ary manoratra hoe:
Izy [amin'ny naha-Talen'ny Masoivoho Iraisampirenena momba ny Atomika azy] dia nanana fifandraisana tsara tamin'ny fitondrana tao Iran mikasika ny resaka nokleary ka raha tafiditra ao anaty fitondrana izy dia hitohy hifandray amim-pirahalahiana amin'ny fitondrana [Iraniana] sy ny Erdogan Tiorka. Aleo hampiako hoe tsy ilaintsika akory ny hidiran'i Ejipta amina ady amin'i Israely. Ny ilaintsika amin'i Ejipta dia ny hanokatra ny sisintany ao Rafah mba hahafahantsika [Iran] mandefa fitaovam-piadiana mankany amin'ny faritra Palestiniana ary manozongozona ny andrim-panjakan'i Mahmoud Abbas any an-toerana.
Any amin'ny famaranana, ilay mpitoraka bilaogy dia miteny fa tsy tokony hiraharaha izay hestika farany nataon'ny Maitso isika [Maitso : ireo mpanohitra] ary manindry fa ry zareo ireo dia mitady tombontsoa fotsiny amin'izay mitranga any Ejipta amin'izao fotoana mba hanamaivanany ny hirifiry nentin'ny fahereseny.
Bahman Azizi dia namoaka sary betsaka avy any amin'ny Revolisiona Islamikan'i Iran tamin'ny 1979 ary mampitaha azy ireny amin'izay fanoherana misy ao Ejipta ankehitriny – hatramin'ny ady an-dalambe ka hatramin'ny fanehoam-piraisankina teo amin'ny tafika sy ny mpanao fihetsiketsehana.
(Sary avy any Ejipta etsy ambony, ary sary avy any Iran no eto ambany, izy roa ireo samy avy ao amin'y vohikala Fars News ).
Azzarmehr miteny fa ny hetsi-panoherana Iraniana tamin'ny 2009 dia goavna noho ny an'ny Ejiptiana sy ny Toniziana saingy ny famoretana no tena henjana indrindray. Hoy ny teniny:
Eo am-pijerena ireo sary avy any Tonizia sy Ejipta dia toa be lavitra kokoa ny habetsahan'ny vahoaka tany Iran. Tsy misy na iray aza tamin'ireo hetsi-panoherana tany Ejipta na Tonizia nanakaiky ny isa telo tapitrisa tao Teheran, enina andro taorian'ilay fifidianan feno hosoka ny Jona tamin'ny taona lasa. Ny famoretana nataon'ny fitondrana tao Iran dia matetika no maherisetra sy mifanahim-biby noho izay any Tonizia sy Ejipta. Ny olona any Ejipta sy Tonizia tsy mbola notafihana tany an-tranony sy nosintonina hivoaka ny trano noho izy ireo nikiaka ny Allah Akbar ny alin'iny fotsiny. Ireo mpanao fihetsiketsehana naratra tany Tonizia sy Ejipta tsy notafihana hatrany amin'ny hopitaly na nosarihana hiala teny ambony fandrianan'ny hopitaly toy ny nahazo azy ireny tany Iran.
Ao amin'ny bialoginy Negahe No, i Shahini, mpitondra fivavahana Silamo, dia mampitaha an'i Hosni Mubarak amin'i Nelson Mandela ary manoratra fa Mandela dia nandao ny fitondrany tao anatin'ny tena mbola fitiavan'ny vahoaka azy ary mivavaka ho azy ny vahoaka, saingy ho an'i Mubarak, mitontona aminy ny zavatra rehetra. Manao hadisoana ilay mpitoraka bilaogy, mihevitra fa i Mubarak dia voafidy tamin'ny fomba demaokratika hatreto ary tsy te-hamotsotra ny fitondrana.